China Portable fast gan type c adapter wall usb charger PD 18W fanamboarana sy orinasa | Staba Electric
*Charger PD 18W Fanazavana antsipirihany
Ity charger 18W PD kely ity miaraka amin'ny fandefasana herinaratra USB dia midika hoe mamarana haingana ny fitaovanao. Ity charger USB USB roa-mpizaha tany ity dia novolavolaina mba hanomezana 5 heny ny herin'ny charger mahazatra amin'ny fitaovana 2 miaraka.
Manasongadina ny fivoarana farany amin'ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha, fandefasana herinaratra USB-C ary fandefasana haingana haingana, ity charger tokana ity no ilainao hampiasa herinaratra ireo fitaovanao ankehitriny ary hijanona eo alohan'ny fiolahana ho an'ny fitaovana elektronika ho avy. Ireo seranana roa ireo dia afaka mandefa hatramin'ny 18W ny vidiny avo lenta amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny finday avo lenta sy tablette ka hatramin'ny solosaina finday USB-C noana toa ny Macbook 12-inch. Manohana fiampangana haingana ho an'ny iPhone handoavana ny iPhone 8 na taty aoriana hatramin'ny aotra ka hatramin'ny 50% ao anatin'ny 30 minitra miaraka amin'ny tariby tafiditra ao, sy ny fitaovana hafa amin'ny hafainganam-pandeha mety indrindra.?
Natao ho fialam-boly mora, ity charger USB PD milanja am-paosy ity dia mifanaraka tsara amin'ny tontolo misy anao any an-trano na rehefa any ivelany ianao. Ity charger compact ity dia mipetaka amin'ny rindrina mba hifanaraka mora foana ao ambadiky ny fanaka na amin'ny toeram-pivarotana sarotra aleha. Izy io koa dia manana refy mifanaraka tsara amin'ny paosy na kitapo, izay midika fa afaka miditra amin'ny famoahana haingana any amin'izay alehanao ianao. Mpamaritra PD haingana miaraka amin'ny azo antoka sy azo antoka-fisorohana ny fihenan'ny volam-be, ny fihoaram-pefy, ny hafanana ary ny lalan-kely.
PD charger rindrambaiko misy mifanentana & manovaova, vahaolana famahana roa-in-iray izay afaka manohana ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra USB (A / C) rehetra toy ny telefaona sy takelaka hiasa irery na miaraka. Ny mpamaky rindrina USB miaraka amina famolavolana plug azo ovaina dia ahafahanao misoroka ny toeram-pivoahana hafa ary mamerina mametraka ny seranana USB A / C ho an'ny fametrahana tariby mifandray tsara - tena ilaina indrindra rehefa mampiasa tariby herinaratra na mpiaro onja miaraka amina toerana maro. Charger rindrina USB PD miaraka amin'ny fitsinjaram-pahefana manan-tsaina ho an'ny fitaovana.
Fanaterana herinaratra haingana Wall Wall Charger
Omeo ny telefaona findainao sy ny takelakao (ao anatin'izany ny iPhone sy ny iPad) fampitomboana herinaratra haingam-pandeha, miaraka amin'ny fandefasana herinaratra manome fiampangana haingam-pandeha.
Charger fampifanarahana & Flexibility USB Adapter
Vahaolana famerenana roa-in-iray izay afaka manohana ny fitaovana mandeha amin'ny USBC sy USBA toa ny iPhone, Samsung ary ireo fitaovana USBC hafa dia miasa na tsy miankina na miaraka.
Finday haingana azo antoka sy azo antoka Mobile PD
Ny teknolojia farany mampiroborobo ny fahombiazan'ny asa sy ny fanatsarana ny fanaparitahana ny hafanana izay miaro ireo fitaovana amin'ny fanoherana tafahoatra, ny hafanana be loatra ary ny fandoavana be loatra.
Adapter USB Charger azo alefa sy azo adika
Raiso ny andraikitrao na aiza na aiza amin'ny haben'ny sakaiza sy plaka azo aforitra, ny endrika endrika feno fika sy ny prong azo aforitra dia miantoka ny fivezivezena faran'izay betsaka any amin'izay alehanao.
Previous: Seranan-tsambo seranana vaovao multi-boat vaovao USB charger PD30W
Manaraka: SVR-172 Series (0.5kVA-5kVA) mampiorina volavolan-tsolika misy fampisehoana miloko